musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Waya Nhau Services » Iyo denda rakashandura sei dzidzo yekugamuchira vaeni?
Waya Nhau Services
Denda iri rakabata maindasitiri ega ega uye indasitiri yekugamuchira vaenzi ndiyo yakamhanyisa kupindura shanduko dzinoitika pasirese. Iyo indasitiri yehunhu hunhu hwekusimba uye kugadzikana yakazviratidza pachayo padenda mamiriro. Kutungamira mabhenefiti ekugamuchira vaeni kuri kuchinjawo munzvimbo dzakaita semabasa, zvichikonzera kuonda, zvivakwa zvinodhura. Iko kune kwakawanda tekinoroji kusangana mune aya mabhenji uye ivo vari kuve vachiwedzera kuwedzera hunyanzvi.
Dr Suborno Bose, Sachigaro uye Chief Mentor we IIHM, anga agara ataura nezve zvingangoitika zvevadzidzi vangangobuda munzvimbo dzekudzidzira kugamuchira vaenzi. Nhasi, denda rakangowedzera mikana yekugamuchira vaeni vakapedza kudzidza uye IIHM iri kutungamira nzira mukudzidzisa vadzidzi nekuvagadzirira iwo indasitiri. Dr Bose vanotenda kuti nyika yapashure pehosha ichagadzira mikana kune vanoshuvira indasitiri uye inodaidzira kunzwisiswa kukuru kwenzvimbo dziri kuwedzera kukosha mazuva ano sekufambira mberi kwetekinoroji muchikamu chevaenzi.
Nyika yepashure-denda ichagadzira nzira nyowani uye dzisingatarisirwe dzevadzidzi vanogamuchira vaeni. Iyo indasitiri ichada kunzwisiswa kukuru kwenzvimbo dzakaita senge tekinoroji mhinduro, yakaderera-kubata masevhisi mamodheru, manejimendi manejimendi, anoshanda mashandiro ekuronga uye kusagadzikana kwenyonganiso. Nezvakada kudai, iko kudikanwa kwehunyanzvi hwekugamuchira vaenzi nyanzvi kuri kungowedzera chete. Naizvozvo, dzidzo ichavawo nevakashinga vadzidzi nehunyanzvi huchavaita kuti vanyatsoita basa uye vagadzirire ramangwana, Kugamuchira vaeni sebasa kucharamba kuchisimuka, kuchimanikidza uye kunakidza.
Dzidzo yekugamuchira vaeni inosanganisira yakawanda yekudzidzira kudzidzisa uye kuratidzwa uye IIHM inopa zvese izvi kuverengera kukura kwakazara kwevadzidzi. Ipo IIHM iri kuvadzidzisa kuti vapinde mumusika webasa mumaindasitiri akasiyana siyana, inovakurudzirawo kuti vatange zvavo kuita bhindauko mune chero nzvimbo inovafadza. Iyo zvakare ine yakasarudzika yemabhizimusi yekuvandudza cell inonzi SAHAS. Izvi zvinonyanya kuve corpus fund kubva uko vadzidzi vanonyatsokurudzirwa kutanga kwavo vega mabasa vanogona kupihwa mari yekudyira. Ivo vanofanirwa kuendesa inoshanda uye inogoneka bhizimusi modhi kuti vakwanise kuwana izvo zvivakwa zveSAHAS.
Iyo denda mamiriro akasiya vechidiki vazhinji vachifunga kuti vaizoitei mumabasa avo. Nekudaro, vadzidzi vazhinji ve IIHM vakatanga mabasa avo vega panguva yeCovid-19 denda rekuvhara uye vachiri kubudirira kumhanyisa mabhizinesi avo. IIHM inopa inovhenekera nharaunda uye rutsigiro system apo vadzidzi vanonzwa kufemerwa uye vane chivimbo chekushandura zviroto zvavo uye mazano kuva echokwadi.
IIHM yakagadzira corpus fund kuburikidza nechirongwa chinonzi SAHAS. Pfungwa iyi ndeyekukurudzira vadzidzi kuti vatange mabasa avo uye IIHM ichatsigira zano ravo kuburikidza neSAHAS. Ichi chiitiko chakakurudzira vadzidzi vazhinji kuti vagadzire panguva yekuvhara uye vatange yavo yekutanga kumusoro.
Unyanzvi hunonyanya kudiwa mumusika wanhasi hunyanzvi. Zvakawanda zvekutsvagisa uye vanofunga vakafungidzira kuti nyika yepashure-denda ichaisa zvakanyanya kuunyoro hunyanzvi. Izvi zvinoreva kukwidziridzwa kwakawanda kwehunyanzvi hwevanhu hwakakosha kwazvo muindasitiri yekugamuchira vaenzi zvakare.
IIHM inobatsira vadzidzi kunzwisisa uye kugona simba reunyanzvi hunyoro. Sezvo vadzidzi ava vachigadzira nzira dzebasa ravo, hunyanzvi uhu hunozove chinhu chikuru chinogadzirisa ramangwana ravo uye chichavaita kuti vagone kutsiga uye vagone kuchinjika, kukudziridza kugona kushandura pfungwa, kurwisa kusava nechokwadi uye kutanga kuvimba. Hunhu uhu huchavabatsira vari vaviri mupfupi-nepakati-refu pavanenge vachitsvaga mikana mitsva nenzira munzira yepashure yedenda.
Mukati medenda iri, IIHM yakaedza kukurudzira vadzidzi, fakaroti pamwe nevashandi. Kuchengetedza kugara uchisangana nevadzidzi kuti vanzwisise zvavanoda uye zvinetswa zvinobatsira kuti varambe vakabatana nedzidzo uye zviitiko zvekambasi kuburikidza nesosi repamhepo. Gore rapfuura, iyo yemakoreji koreji yakarongedzwa neIIHM, Rigolo, yakaitirwa pachikuva chepamhepo apo vadzidzi vaikurudzirwa kutora chikamu uye kuratidza tarenda ravo.
Pakatanga fungu mu2020 uye nyika yese yakapinda mukuvhara, IIHM yaive imwe yemasangano ekutanga akasarudza kuenderera mberi nedzidzo kuburikidza neyepamhepo svikiro. Sezvo isu tanga tine tekinoroji yedu munzvimbo, isu ipapo ipapo tinogona kutanga makirasi. Nekudaro Dr Bose akataura kuti IIHM ine nhoroondo yemakirasi chaiwo sevazhinji vabiki vepasi rese uye nyanzvi dzekugamuchira vaiwanzo kutora makirasi epamhepo munguva yakapfuura. Saka uyu waive mumwe mukana wekutsvaga hutsva-zera kudzidza maitiro.
Pfungwa isina kuzivikanwa yekuti kugamuchira vaenzi inongoenderana nemahotera iri kujekeswa uye ndomaitirwo ari kuitwa IIHM nedzidzo. Kune nyika yemikana yakamirira vadzidzi vanogamuchira vaeni uye IIHM inogara ichikurudzira vadzidzi kuti vaongorore mamwe mabhizinesi nemabhizimusi mikana zvakare. Kugamuchira vaeni vadzidzi vari kudiwa mumaindasitiri akasiyana siyana senge mafambiro, zviitiko zvekutungamira, kubhengi, hutano, yakakwira-kumagumo zvivakwa, kutengesa kwepamusoro, kubhururuka, kufamba kwechikepe nevamwe vazhinji. Aya mabasa anosanganisira kusiana mumabasa uye zvakare kubvumidza hunyanzvi uye kushamwaridzana kwehukama. Vadzidzi veCulinary, zvakare, vanodzidziswa zvemabhizimusi uye bhizinesi acumen inovashongedzera nenheyo dzinogadzira ipapo kugadzirira ramangwana bhizinesi.
Chiratidzo che IIHM kutora dzidzo yekugamuchira vaeni kune imwe nhanho zvachose iyo ichagadzirira vadzidzi vanhasi maindasitiri emangwana nemabhizinesi. Inotungamira shanduko uye ichigadzirira vadzidzi vayo hutsva hutsva iyo yakachinja nyika zvachose mumakore maviri apfuura. Kutsvaga mukana wekudzidzisa vaeni ndosaka chirongwa cheFIIHM chekudyidzana chinosanganisira vese vemaindasitiri vakasimba uye nyanzvi dzinozopa zano nekugovana zviitiko zvavo zveindasitiri nevadzidzi zvakatangwa. Nzvimbo yekutsvagisa mukushanya kunova ndiko kudiwa kweawa yakarongwawo kuitira kuti dzidzo yekugamuchira vaeni isanganiswe zvisina mutsigo nezvidzidzo zvekushanya.
DR Suborno Bose CEO we IIHM Hotel Chikoro anotungamira chinzvimbo kubva kumberi chinangwa nekugadzirisa dzidzo yeiyo nyowani inova iyo zvakare kudiwa kweawa.